Nahoana Ianao Te A roa Wheel Self ny mampifandanja ny Electric Scooter - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Tsy nanana lamaody sasany izay nanana olana tamin'ny bateria anaty rafitra sy ny birao hatao voaroaka. Ny birao ihany koa amin'ny manaiky Mitarika tsikelikely ny aretina Sela Mpandray Hafanana mba hanaraka anao na aiza na aiza ianao manilika ny lanjany ho. Rehefa niakatra ny Swagtron, ny dingana 1 amin'ny fotoana tongotra avy any aoriana. Raha hitranga miankina indray, ianao indray dingana. Raha ny ankamaroan'ny tena ny mampifandanja ny môtô mahatohitra be loatra hafainganam-pandeha, fiatoana tampoka sy overcharging, dia manana fironana tsy hiaritra ny vato mavesatra ho an'ny ny fotoana lava be durations. Mety ho mora kokoa ny be eran'i Boligaria. Ny Roto-tarika (na Koowheel marika ) birao tena mety ho mora ny dia, ary mahatsapa mafy azo antoka kokoa raha oharina amin'ny hafa, indrindra fa ny haingana dia mora, noho izany no tsy tena mahatsapa toy izany mila hanipy anao eny. Ny marika vaovao Koowheel famolavolana ny birao tokony handeha amin'ny alalan'ny taratasim-bola isan-karazany mba hahazo ny Ul 2272 fanamarinana.
Rehefa tonga ny fotoana mba ho afaka hivoaka ka hahazo ny zavatra nentina nivoaka, ka mila mampiseho lohany raha mitoetra manao izany, ny Koowheel iray patanty lalana eny 8.5inch kodiarana lehibe roa kodia hoverboard K7 hanao ny asa ho anareo. Swagway dia ny volamena tanora ny hoverboard varotra eto amin'ny raharaha ny haino aman-jery. Izao tontolo izao dia tena nanapa-kevitra ny anarana azy hoverboard. Fantaro ny amin'ny endri-javatra, famolavolana fanapahan-kevitra, specs, fanampiny safidy rehetra dia niresaka momba hoverboards tsirairay ary manana hevitra izay hoverboard dia mety tsara araka ny zavatra ilaina sy ny paosy. Ho an'ny rehetra-tanety nandeha, ianao maniry hoverboard amin'ny kodiarana lehibe kokoa. Tao anatin'ny roa minitra ny mitandrina, ianao mahatsiaro ho toy ny mpanohana izay Efa Scootin 'nandritra ny taona maro. Koowheel Board touts ny tenany ho toy ny hoverboard, nefa azo antoka fa toa ho tahaka bebe kokoa tahaka ny skateboard. Tsy misy fiara raitra, dia toy ny skateboard sy ny scooter mifangaro izay mety hanolotra fifaliana ny olona mitaingina azy. Rehefa avy namaky ny Self ny mampifandanja ny Scooter 2 kodia hoverboard Easy Nitondra mirefy 6.5 fingotra Ny ventin-Tires Jiro LED K8, ianao efa nahazo ny safidy hanao ny fantina. Manantena izahay fa ny evaluations dia mahasoa ho anao, mba hanao baovao fividianana.
Noho ny fahefana mora foana hidirana avy ao anatiny ho avy sy ny mifamadika amin'izany, izy ireo tonga lafatra mba ho ampiasaina ao amin'ny sampam-pianarana campus amin'ny mozika fety, ary ny maro hafa. Soa ihany fa indrindra, raha tsy izy rehetra, tena mahay mampifandanja scooter mpivarotra eny an-tsena no Na izany na tsy mandeha fa ny zavatra azo antoka dia tsy ho sarotra ho an'ny olona mba hampiasa. Rehefa avy hitsara tena fihetsika toerana amin'ny fametrahana mazava tsara naorina-in milamina gyroscope, Hafanàm-po an atidoha ny fiara miasa avy amin'ny alalan'ny toro-lalana marina ny sarotra sy be loatra-dian'ny microprocessor foibe, ny bateria mitarika ny maotera mba tsy fiovaovantsika ny fiara. Ankoatra izany, ny fisotroana lohalika padded dia natao mba manatsara ny fomba fitantanana ianao ny fomba ny fitaovana azo namboamboarin'i, dia toy izany no mahatonga azy ho mora kokoa ho anao noho ny fametrahana mazava tsara ny no mamily. Izany koa dia manasongadina avo lenta aluminium Hub kodia sy fingotra mora kodiarana ho an'ny mitaingina.